अब यस्तो हुनेछ लकडाउन, नयाँ मोडालिटी तयार भयो ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/अब यस्तो हुनेछ लकडाउन, नयाँ मोडालिटी तयार भयो !
काठमाडौँ, २० जेठ । सर्वसाधारण लामो लकडाउनका कारण आजित भएपछि सरकार अब मोडालिटी परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । कोरोनाको जोखिम भएको स्थान बाहेक अन्य ठाउँमा लकडाउन खुकुलो बनाएर लैजाने रणनीति अनुसार अब सरकारले नयाँ कदम चाल्ने भएको छ ।
त्यसका लागि तयार पारिएको रणनीतिका बारेमा अहिले छलफल जारी छ । सीसीएमसी सचिवालय र मूख्यसचिव नेतृत्वको एक्सन टिमबाट तयार पारिएको रणनीति मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरिने छ । सो समितिले सरकारलाई मोडालिटि बनाएर सिफारिस गर्ने छ । समितिमा जोखिम नभएका स्थानमा लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति सहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
यो खाकाबारे छलफल गर्न अहिले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ । यो वैठकवाट रणनीति सहितको कार्ययोजना पास भएपछि मन्त्रीपरिषदमा पेस गरिने छ ।
समितिका सदस्यहरु अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यो विषयमा अनुदार देखिएका छन् । उनले जनताको जिवनसंग कुनै पनि कुराको सम्झौता गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै जोडका कारण जेठ २० मा सकिने लकडाउनलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याएको हो ।
घरमै स्वादिलो दही जमाउने सरल काइदा